Wonke umfazi ufuna ukuba mnandi. Sisebenzisa iindlela ezahlukeneyo kunye nezindlela zokuvuselela nokugcina ubuhle bethu bemvelo. Siya kwiindlela ezahlukeneyo, ukuze sikhohlise abanye, ngokwabo kunye nexesha. Lo mgaqo, ulawulo luhlala lukhangeleka lukhulu, lubekwe kwisigxina kumntwana ukususela kwintombazana. Oomama kunye nogogo bafundisa ukuba intombazana, umfazi kufuneka ahlale ebonakala epheleleyo. Kuxhomekeke kwindlela abantu abayasiqonda ngayo, umsebenzi wethu kunye nenjabulo yethu ngenxa yoko. Ngokukhathekayo, ekhangele ezandleni zezulu-ezitshitshiweyo, umntu uya kufumana into eqhelekileyo, okanye inqwenelekayo, into ekuthetha ngayo ngesikhumba ebusweni, ekhethwe kwikhadi elivakatyelayo nayiphi na intokazi. Ngako oko, isihloko sesicatshulwa sethu samhlanje: "Ukunyamekela ubuso obuninzi kunye nokwenza isikhumba."
Eli nqaku aliyi kuchaza indlela omele uphile ngayo noko ukwenza. Apha uya kufumana izicwangciso zokunakekelwa kancinci kwesikhumba ubuso kunye nezandla. Ngamanye amaxesha amantombazana nabasetyhini abafuna ukubonakala kwabo bafezekise ngokupheleleyo. Ngamanye amaxesha asiyikuqonda umahluko phakathi kweentlobo zesikhumba, akukho ntlukwano ekhatyweni kwesikhumba esomileyo okanye esinamafutha. Asazi ukuba ulusu lwezandla zethu lufuna ukunakekelwa okhethekileyo. Ubuhle balo naliphi na ibhinqa liqala kwaye libhekiselele kwimeko enhle yolusu lwakhe, olufuna ukunakekelwa rhoqo. Ngoko ke, ukugcina imeko efanelekileyo, kufuneka ukhethe ukunakekelwa kancinci kwesikhumba kunye nobuso.
Okokuqala, isikhumba sineentlobo ezine: ezomileyo, eziqhelekileyo, ezinamafutha, ezixutywe, kwaye nganye yazo zidinga ukunakekelwa okhethekileyo. Uluhlu lwesikhumba lunokumiselwa lula ngaphandle kokusebenzisa naluphi na uphando lwebhubhoratri.
Ikhumba elomileyo linokuqatshelwa ngokukhawuleza ngokukhangela. Ngokuqhelekileyo, isikhumba esomileyo sivutha rhoqo, ukubetha kunye neentlaka, eziza kukuphazamiseka ebomini. Ikhumba elomileyo libangelwa ukungabikho kwamanzi emzimbeni, oko kukuthi, ukulinganiswa kwamanzi okuphazamiseka. Ngoko ke, abafazi abanolu hlobo lwekhumba kufuneka basebenzise izimonyo ezithe tye kunye nezizodwa. Ikhumba elomileyo lifuna unonophelo olukhethekileyo, ngaphandle kobudala obudala, luya kulahla zonke izakhiwo zayo ezibonakalayo kunye nokubonakala okunempilo, nokubuyisela ukusebenza kwayo ngokuqhelekileyo kuya kuba nzima. Ukunyamekela kancinci kwesikhumba esomileyo ebusweni kunye nezandla kukusetyenziswa kweemveliso ezizodwa zokuphucula, iiserawu, izixhobo ezifanelekileyo ezifanelekileyo kulolu hlobo lolusu. Qiniseka ukuba uhlamba i-cream ngaphambi kokuba ulale kwaye uhlambe izimonyo kunye nezinye iimveliso ezisetyenzisiweyo ebusweni, ukuze ubusuku lukwazi ukuphefumula nokubuyisa ebusuku. Kwakhona, endaweni yokusebenzisa izimonyo ezizodwa, unokwenza uxinzelelo kunye neengcezu kwimveliso yobisi. Ngenxa yoko, ubisi uphelele, apho ungongeza khona ipoyileji yeoli yeoli, okanye unokwenza ubungqina bakho bubuncwane ngobuncwane obununci.
Uhlobo oluqhelekileyo lolusu, luyakunqweneleka ngabo bonke abafazi. Ekubeni lolu hlobo lwesikhumba alukhangeki kwaye lubukeka kakuhle. Ikhumba eliqhelekileyo linembonakalo enempilo, imnandi kwaye ithambile kwi-touch - lo ngumda wamaphupha. Kodwa ngexesha elifanayo, ulusu lobuso kunye nezandla zolu hlobo lwesikhumba oluqhelekileyo nalo luneemfuno zokunyamekela. Injongo ephambili kukuba kugcinwe ukubonakala okusemgangathweni kwesikhumba, ukuxhaswa ngobuchule kunye nokunciphisa inkqubo yokuguga. Ngolu hlobo lolusu, ukusetyenziswa kwezonyango ezahlukeneyo kuyinqweneleka ukunciphisa. Ukunyamekela lolu hlobo lolusu lobuso kunye nezandla lulula, ukusetyenziswa kwezonyiso zokunciphisa ngexesha lokuhlanjululwa kwawo kusasa kwaye kusihlwa kuya kugcina imeko efanelekileyo. Kodwa ngexesha elifanayo indlela yokukhetha ama-creams kunye nezimonyo iselinye. Ungasebenzisi ama-creams kunye nee-lotions kwiindidi zesikhumba ezinamafutha kunye nolomileyo, oku kuya kudala i-greasy effect kwesikhumba. Ngaphambi kokuba usebenzise i powder kunye nezinye izimonyo, sebenzisa kakuhle i-cream ekwimeko. Ukugcina ifom ephilileyo ebusweni bobuso kunye nezandla ukulala okuphilileyo, ukuhlamba ngamanzi athambileyo, ukutya okunomsoco, ukuhlalisa umzimba. Kwaye njengoko kuyimfuneko ukuba ungayikhohlwa ukuba nabantu abanomdla wesikhumba oqhelekileyo baphenduka ngabanye kwiindidi ezahlukeneyo zemveliso.
Isikhumba se-oily akulula ukunyamekela. Emva koko, isikhumba somzimba esicacisiweyo sihlanjululwe ngaphandle koko ukuhlanjululwa ngokungonelaneleko kunokukhokelela kwiingxaki zesikhumba. Unonophelo olungcono kakhulu kwesikhumba esinamafutha obuso kunye nezandla kukuzaliseka kwemithetho emininzi engaqondakaliyo. Okokuqala, awukwazi ukuhlamba ngamanzi ashushu kakhulu, oku kukhuthaza izigulane ezizimeleyo ukuba zisebenze. Okwesibini, emva kokuhlamba ngamanzi atshisayo, kufuneka uhlambulule ulusu lwezandla kunye nobuso ngamanzi apholileyo amaxesha ambalwa. Ngokuqhelekileyo, kulungile ukuhlamba ngamanzi apholileyo - ivuselela isikhumba kwaye iyancipha iipolisi. Kwakhona kuncedo ukusula ulusu ngeengqayi zeqhwa. Ngobusuku, isikhumba esinamafutha esandla kunye nobuso sihlambulukile ngokucoceka, kunye ne-boric okanye i-camphor yotywala. Kufanelekileyo kakhulu ukunakekelwa kwesikhumba seoliya kunye nokuxubha ubuso kunye ne-swab efakwe kwijusi yeklabishi. Oogqirha bancoma wonke umntu ukuba aphuze iteksi yetiyi ye-herbal kumxube we-floores, i-rhizomes yengqolowa yengca, i-horsetail kunye ne-nettle. Kwakhona kunconywa ngabo banesifo esinamafutha kunye nesandla, njengendlela efanelekileyo yokubanakekela kukuba ukwenze uxinzelelo lwe-herbs ezifana nerrow, marigold, wisdom, hops, chestnut, i-violets. Ezi zityalo zinegalelo ekukhungeni kwesikhumba, ukuvalwa kwesikhumba kunye nokuvimbela inkqubo yokrota kwesikhumba, okuyimfuneko kakhulu kubanikazi balolu hlobo lolusu.
Ixubile okanye ibizwa ngokuba yinkampani edibeneyo, idinga ukunakekelwa okhethekileyo. Ukunyamekela kwesikhumba ebusweni kunye nezandla kukuvumela ukuba uhlale ubumnandi nobuhle, unyamekele ulusu namhlanje, uya kukubulela kusasa. Inkathalo idinga nayiphi na isikhumba, kwaye idibene ngokukodwa. Ngokuqhelekileyo ingxaki yesikhumba ehlangeneyo. Ekubeni i-T-zone iyinxeba kwaye inokuba ne-acne acne, kunye nezihlathi ezithinteleyo ziya kuba zomile. Kufuneka ubeke ingqalelo ekunyamekeleni lolu hlobo lolusu, sebenzisa ama-creams akhethekileyo. Amaqonga anjalo aomileyo amanxweme kunye ne-moisten kwimimandla eyomileyo, ukudala ibhalansi ethile. Iingcali ziqwalasela ukunyamekela olu luhlobo lobuso kunye nezandla kukusetyenziswa kwezicwisi ezikhethekileyo, kodwa musa ukulibala, ukuba impumlo kunye nebunzi bomzimba zihlambulukile, akufuneki zixutywe nge-ukhilimu. Kufuneka ukhethe imveliso yokunyamekela isikhumba ekhutshanayo kwaye ikhuphe ukukhanya kwesikhumba. Oku kuya kuphelisa umonakalo nokuphucula imeko yesikhumba.
Ungakulibali ukuba ukuba awuqinisekanga ukuba uluhlobo luni lolusu, ngoko kukulungele ukubonisana neengcali, uthathe iimvavanyo eziyimfuneko ukukhetha uhlobo lwakho lolusu.
I-stylish nge-bangs-i-autumn trend-2016
Iingcebiso ezifanelekileyo zomfanekiso omhle
Iiprotheni, impilo enempilo, i-salad yaseMedithera: iimfihlelo zomfanekiso ofanelekileyo uKate Middleton
Imfihlelo yobuhle besifazana
Ubuhle bokomoya nobungqina bentombazana
Ukuzivocavoca ukwenza isithuba esifanelekileyo
I-Pasta ene-ricotta kunye netamatato
Yintoni enokuyifaka njengesipho esivela eItali?
Iimbotyi ezitshiweyo zenyama
Imithetho yokukrazula ngamanzi
Iipancakes kunye ne-banana-chocolate
Ukunyamekela emva kokuziswa
I-Recipe ye-Waffle Custard Recipe
Lasagne kwi microwave
Eyona ndawo iphezulu kwiikhijethi ezikhethiweyo
Isaladi ekhuselweyo yenkukhu
I-recipe ehlekayo ye dessert: i-Vuci cookies "I-velvet ebomvu"
Indlela iTek Green ichaphazela ngayo impilo
Umhlobo wam uthandana nomtyholi, unokumnceda njani?